बजेट बहस : सर्वहारा सरकार गरीबमारा नबनोस् — janadristi
बजेट बहस : सर्वहारा सरकार गरीबमारा नबनोस्
२२ वैशाख २०७७, सोमवार ०५:१३
संकट भनेको एउटा मौका पनि हो, संकटलाई पनि सम्भावनामा परिणत गर्नुपर्छ । ठूला-ठूला परिवर्तनहरु यस्तै संकटमा बेला नै आउँछ । मौका छोप्न सकियो भने साँच्चिकै कल्पनै नगरेको परिवर्तन पनि हुन सक्छ ।
संकटका बेला परिवर्तन भएको सन् १९९१ भारतमा पीभी नरसिंह राओ प्रधानमन्त्री र मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री थिए । त्यो बला भारतको आर्थिक स्थिति यति बिग्रिएको थियो कि आयात गर्न १५ दिनलाई भन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति थिएन । त्यतिबेला भारतले बेलायतमा सुन नै पठाएर विदेशी मुद्रा ल्याउनुपर्ने स्थिति थियो । देश नै टाट पल्टिने अवस्था थियो । उनीहरुलाई दबाब थियो । त्योबेला भारतमा विभिन्न सुधारका कार्यक्रम आए । खासमा मनमोहन त्यति धेरै सुधारकेन्दि्रत मान्छे होइनन् । तर, त्यसबेला एउटा पूर्णखालको ‘डिपार्चर’ नै भयो । त्यसले भारतको विकासको कोर्स नै फरक भएर गयो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि एक करोडभन्दा बढी अमेरिकन फौज युरोपबाट अमेरिकामा फर्केर आए । त्यसपछि अहिले नोबल पुरस्कार जितेका विज्ञहरुले नै अब अमेरिकामा यति ठूलो ब्यापक बेरोजगारी हुन्छ कि तहस-नहसकै अवस्था आउँछ भनेर अड्कलबाजी गरे । तर, ती मान्छे फर्केर आएपछि अमेरिकामा अर्थतन्त्र ब्यापक विस्तार भयो ।
अबको बजेटका कुरा गर्दा खर्च घटाउनुपर्छ भन्ने कुुरा स्पष्ट भइसक्यो । त्यसका लागि अहिले राज्य तयार छ ? नेपालको आम्दानी नभएको होइन । हाम्रोको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २०-२५ प्रतिशत राजस्व आउँछ । भारत र बंगलादेशको भन्दा बढी छ । त्यति हुँदा पनि हामी अनावश्यक खर्च गरिरहेका छौं ।खर्च घटाउन धेरै गाह्रो पनि छैन । डिल्लीराज खनालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले रिपोर्टमा सुझाव दिएकै छ
हामीले सबै कुरा परिवर्तन भयो भन्छौं, तर यहाँ के भएको छ ? राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भयो, धेरै ठूला-ठूला व्यवस्था परिवर्तन भए । तर, काम गर्ने शैली र पक्षमा केही पनि परिवर्तन भएको छैन । अहिले पनि त्यही रिझाउने, चाकरी, त्यही कमिसनतन्त्र, त्यही भ्रष्टाचार यथावत छ ।
यस्तोबेलामा कसरी सुधार गर्ने त ? पहिलो त सुध्रिन र सुधार्न तयार नै हुनुपर्‍यो ? के यो सरकार तयार छ त ? अहिले त संकट छ, अब पहिलाकै शैलीमा खर्च गरेर टिकिँदैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति खुम्चिएको छ, रेमिट्यान्स कमजोर हँुदैछ, पर्यटन क्षेत्रमा समस्या छ । तर, विकासको माग त त्यतिकै छ । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने ? भोलि आम्दानी घटेर गयो भने आफैंले आफ्नो हैसियत हेरेर अन्य खर्च काट्न सक्नुपर्‍यो । जे जति छ, त्यसको सदुपयोग गर्न सकनुपर्‍यो । यो एकदम ‘कमन सेन्स’को कुरा हो ।
सुरु नगरेको होइन, अहिलेको सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौता भनेर मन्त्रीहरुसँग गरेको थियो, सचिवहरुसँग गरेको थियो । तर, त्यही सम्झौता गरेको ७ दिनमा मन्त्री परिवर्तन हुन्छ, १५ दिनमा सचिव परिवर्तन हुन्न्छ । हामी त्यसमा गम्भीर रहेछौं त ? त्यस्तो देखिएन । कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका सचिव र महानिर्देशकलाई कति खर्च गर्छु भनेका थियौ, कति गर्‍यौं भनेर हेरिनुपर्ने हो । काम गर्न नसक्नेलाई अर्को वर्ष बजेट दिन्न भन्नुपर्ने हो । कि त ‘पर्फमेन्स बजेटिङ’मा जानुपर्‍यो, ‘प्रोग्राम बजेटिङ’मा जानुपर्‍यो । त्यो भयो भने तपाईंले आफूले इच्छा गरेको ठाउँमा दिन पाउनुभएन ।
८ महिनामा २०/२२ प्रतिशत भन्दा बढ्ता विकास बजेट खर्च भएको छैन । २ वर्ष भयो सरकार बनेको, कुनै सुधार भएको छैन । डिल्लीराज खनालको रिपोर्ट लुकाएर राखिएको छ, जनतामाझ ल्याइएको छैन । यो सरकारको नियत सुधार गरौं भन्ने त देखिएन । अनि बजेटमा यति खर्च गर्छु र उति खर्च गर्छु भनेर जति पैसा राखे पनि यो त कुनै अर्थ नै भएन । सबै चाहन्छन् कि बजेटमा जे लेखिएको हुन्छ, त्यो कार्यान्वयन होस् । अहिले प्राथमिकतामा कुनै समस्या छैन ।
अहिले लगानी गर्ने सरकारले मात्रै हैन, निजी क्षेत्रले पनि हो । यदि ५ लाख युवा मध्यपूर्वी एसियाबाट रोजगारी गुमाएर फर्किए भने के गर्ने ? अहिलेदेखि नै केही न केही ‘सिनारियो’ त चाहियो नि । ४-५ महिनामा कोभिडको समस्या समाधान हुने भए के गर्ने ? ९ महिना वा एक वर्षसम्म यो संकट लम्बियो भने के हुन्छ ? एउटा अन्दाज त गर्नुपर्‍यो ।
सरकार गरिबमारा नबनोस्
अब काम गर्ने तौरतरिका पूर्णरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्‍यो, नभए हामी सकिन्छौं भन्ने संकटको अनुभूति आयो भने मनमोहन सिंहले गरेको जस्तो पनि होला यहाँ । वा एक करोड मान्छे आउँदा पनि अमेरिकाले रोजगारी दिएको जस्तो गर्न सकिएला । त्यो भएन भने मैले आउने दिन गाह्रो देखेको छु ।
त्यसैले एउटा पाटोमा अवसर पनि हो । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुबैका लागि । अर्थमन्त्रीले मात्रै यस्तो गर्छु भनेर जनताले विश्वास गर्दैनन् । जुन पार्टी शक्तिमा छ, जसले सत्ता सञ्चालन गरेको छ, उनीहरुबाटै यो काम देखिनुपर्‍यो । नतिजामा देखिनुपर्‍यो । अब दुई सयको माललाई ६ सय तिर्दैनौं भन्ने देखिनुपर्‍यो, बेइमानी गर्नेलाई कारबाही गछौर्ं भन्ने देखिनुपर्‍यो, काम गर्नेलाई यहाँ-यहाँ सहज बनायौं भन्ने देखिनुपर्‍यो । खाली आयातमात्रै बढाउने, त्यसबाटै राजस्व उठाएर सरकार चलाउने, मोटर र हेलिकोप्टर चढ्ने सुविधा अब छैन । ‘आईदर यू सेप अप अर सेप आउट’ भन्छ नि, त्यो हुनुपर्‍यो । कि सेपभित्रै जानुपर्‍यो, नभए बाहिर निस्कन पर्‍यो ।
गम्भीर विषयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई चिन्ता हुनुपर्‍यो । अर्थमन्त्रीले बजेट बनायो, सक्कियो भन्ने चिन्तन बनाउनु भएन । संसदकै समितिहरु पनि सक्रिय हुन सकेको छैनन् । त्यसलाई ‘भर्चुअल कन्फ्रेन्स’ गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ छलफलमा ल्याउनुपर्‍यो । अहिले माननीयलाई पैसा दिने बेला हो र अहिले ? अहिले सांसदलाई परियोजनाका लागि भनेर पैसा दिने बेला हुँदै हैन । अब त पेली-पेली कसरी कृषि, पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जनामा कसरी लगानी लैजाने र निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्‍यो ।